Mogadishu Journal » Dowlada Soomaaliya oo si adag uga jawaabtay Qoraalkii kasoo baxay Dowlada Imaaraadka
Muqdisho:-Wasiirka Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya Cusmaan Dubbe oo goordhaw Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay qoraal shalay kasoo baxay dowlada Imaaraadka oo looga hadlay khalalaasihii Jimcihii ka dhacay Muqdisho.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan u cadayneynaa in hadalka shalay Imaaraadku soo saaray uu yahay mid qaranimada iyo jiritaanka dalka baabi’inaya. Waxaana muhiim ah dadka soomaaliyeed iney fahmaan waxa lala damacsanyahay oo ah in dagaal sokeeye ka dhaco dalka si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyey” Wasiirka Warfaafinta Cismaan Abokor Dubbe
Wasiirka ayaa sheegay in qoraalka kasoo baxay dowlada Imaaraadka ay muujineyso in aysan aqoonsaneyn dowladnimada Soomaaliya ayna inkirayaan, waxa uuna taasi ku tilmaamay mid meel ka dhac ah oo ka baxsan diblumaasiyada.
”Warqada kasoo baxday Imaaraadka waxaa ka muuqda in Soomaaliya la rabo in ay noqoto sida Yemen oo ay ka abuurto foodo iyo barakac , waana iska diideen umada Soomaaliyeed oo horey usoo daawaday filimada cabsida ah” ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Waxa uu sheegay Wasiirka in warqada Imaaradaka ay muujineyso shakiga ay ka qabeen in ay hagar daamo ku wadaan dalkka , waxa uuna xusay in ay tani muujineyso markii la gaaray heshiiskii 17-dii sebtember in qaar kamid ah madaxda maamulada u safreen Imaaraadka.
”Warqadan kasoo baxday Imaaraadka ayaa Shacabka Soomaaliyeed iyo dowlada dib u xasuusisay maalmihii la saxiixay heshiiskii 17-kii September qaar kamid ah Madaxdii heshiiska wax ka saxiixay isla maalmihiiba u safreen Imaaraadka, markii ay kasoo laabteena la yimid shuruudo cusub oo abuuray caqabado hor leh, dowlada Soomaaliya waxa ay ka fajacsan tahay colaada intaa la eg ee Imaaraadku u qabo Soomaaliya” ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Wasiirka ayaa sheegay in qoraalka kasoo baxay dowlada Imaaraadka uu wax u dhimayo qaranimada iyo jiritaanka Qaranka Soomaaliya, waxa uuna ka dalbaday Imaraadka in raali galin iyo cudur daar ka bixiyaan gefka ay kula kaceen Qaranimada Soomaaliya.
Warkan kasoo baxay dowlada Soomaaliya ayaa kusoo aadeysa xili dowlada Imaaraadka Qoraal kasoo baxay ay uga hadleysay khalalaasihii ka dhacay Muqdisho dowlada uu hogaamiyo Farmaajo ugu aqoonsatay mid waqtigeeda dhamaaday oo KMG ah.